५ वर्ष बितिसक्दा पनि किसानले पाएनन उखुको २ करोड ४८ लाख
प्रिंस मिश्रा कपिलवस्तु,१० भदौ । ५ बर्ष बितिसक्यो तर कपिलवस्तुका किसानले २ करोड ४८ लाख २३हजार रुपैया उखुको भुक्तानी कहिले पाउने निश्चित छैन । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा अधिराज्य भरी नै सुगर मील मार्फत कारोबार गर्ने...
नमस्ते कपिलवस्तुको बस गोरुसिंगेमा दुर्घटना
कपिलवस्तु, १० भदौ । नमस्ते कपिलवस्तुको बस गोरुसिंगेमा दुर्घटनामा परेको छ । मङ्गलबार विहान ४.२० बजेको समयमा बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नं. १० चेतरादेईमा बस पल्टिएको हो । काठमाडौंबाट तौलिहवा आउँदै गरेको लु २ प १५६५...
रविको समर्थनमा कपिलवस्तुमा प्रर्दशन (फोटो फिचर)
कपिलवस्तु, ७ भदौ । कपिलवस्तुमा स्वर्गीय पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा प्रहरीको छानबिनमा रहेका न्यूज २४ का सिधा कुरा जनता संग कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने समर्थकले प्रदर्शन गरेका छन । रबिका समर्थकहरुले जिल्लाको शिवराज नगरपालिका चन्द्रौटा...
कृष्णनगरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ८० जनाले रगत दान गरे
प्रिंस मिश्रा, कृष्णनगर, ७ भदौ । कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा सशस्त्र प्रहरी बल ३९ गुल्म कृष्णनगरको आयोजना र लायन्स क्लब आफ कृष्णनगरको सहयोगमा खुल्ला रक्तादान कार्यक्रम संपन्न भएको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ लाई लाल मोहर लगाएको...
प्रिंस मिश्रा कपिलवस्तु, ५ भद्रा । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाले भाद्र ६ गते शुक्रवार सार्वजनिक विदा दिएको छ । श्रीकृष्ण जन्माअष्टमीको अवसरमा नगरपालिकाले सुचना प्रकाशित गरेर विदा दिएको हो । नगरपालिकाले स्थानीय विदा अन्र्तगत भोली विदा दिएको हो...
प्रिंस मिश्र कपिलवस्तु, ५ भदौ । कपिलबस्तुको मुख्य व्यापारिक कृष्णनगर नाकालाई कोईलाबास जस्तैगरि सुकाउने षड्यन्त्र भईरहेको स्थानिय व्यापारीहरुले आरोप लगाएका छन । जिल्लाका कृष्णनगर नाका भन्सार नाका मात्र नभई व्यापारिक केन्द्र भएका कारण षड्यन्त्रपुर्ण तरिकाले यस...
प्रिंस मिश्र कृष्णनगर, ५ भदौ । नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तुले सरकारले भारतीय सवारी साधनलाई भन्सारमा कडाई गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । सिमा क्षेत्रको पारस्परिक सम्बन्धलाई नजर अन्दाज गरी भारतीय सवारी साधनलाई भन्सारमा कडाई गरेको प्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको...
प्रिंस मिश्रा कपिलवस्तु, ५ भदौ । कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा भन्सारको जटिलताले भारतीय पर्यटकमा कमी आउनुका साथै राजस्व असुली घट्ने अनुमान गरिएको छ । सूचना प्रविधिको विकासले काम सहज र सरल हुनुको सट्टा झनझटिलो बन्दै गएको छ ।भदौ...
कपिलवस्तु, ३ भदौ । कपिलबस्तुमा अज्ञात व्यक्तिले हतियार देखाएर ३ लाख रुपैयाँ लुटेका छन् । तौलिहवाबाट सिकोटवा जाने बाटोमा रकम लुटिएको थियो । तौलिहवामा रहेको वाणिज्य बैंकबाट पैसा निकालेर बुद्धभुमि नगरपालिका वडा नं. १० विजगौरी...